प्लास्टिकको बोतल ल्याउनुहोस्, नगद लिनुहोस्
हङकङको सबैभन्दा ठूलो पेय पदार्थ उत्पादकका अनुसार एक पटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकका बोतल “रिसाईकल” गरे वापत हङकङवासीले चाँडै आर्थिक प्रोत्साहन पाउने भएका छन् । कम्पनीले अझ धेरै वाटर डिस्पेन्सर राख्ने योजना पनि बनाएको छ ।
प्लास्टिकजन्य फोहोर न्युनिकरणबारे सर्वसाधारणलाई शिक्षा दिन, वाटसन्स वाटरले ४ सय वटा “वाटर बोटल रिभर्स भेन्डिङ मेशिन” ल्याउने बुधबार घोषणा गरेको छ । ती मेशिनहरूले सबै ब्रान्डका २ सय ३० मिलिलीटर देखि १.८ लीटर क्षमताका एक हजार बोतल संकलन गर्नेछ ।
“हामीले यसलाई व्यावसायिक परियोजना बनाउने प्रयास गरेको होईन । पुनर्चक्रण गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो त्यसैले हामी सबै ब्रान्ड संकलन गरिरहेका छौं । सबैलाई स्वागत छ, यद्यपि, शुरूमा पानीका बोतल मात्रै संकलन गरिनेछ,” ए. एस. वाट्सनका प्रबन्ध निर्देशक मिसेल च्यान वेन-मीले भनिन् । कम्पनीले यो अभियानलाई विस्तार गरी अन्य पेय पदार्थका बोतल संकलन गर्ने आशा गरेको उनले बताईन् ।
मेशिनमा बोतल राखेपछि, प्रयोगकर्ताहरूले कुपन वा उपहार पाउनेछन् ।
“उनीहरूले ‘ड्रप्स अफ फन’ नामक मोबाईल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ,” वाट्सन्स वाटरका मार्केटिङ महाप्रबन्धक एडमन्ड यु ताक-चिउले भने ।
“सदस्य बन्नुहोस्, मेशिनमा सदस्यता कोड स्क्यान गर्नुहोस्, त्यसपछि पानीको बोतलमा भएको बार कोड स्क्यान गर्नुहोस् र मेशिनमा बोतल राख्नुहोस् । प्रत्येक वाटसन्स बोतलका लागि, प्रयोगकर्ताले पाँच अंक पाउनेछन् र २५ अंक जम्मा भए उनीहरूले ५० हङकङ डलर बराबरको अनलाईन नगद कुपन पाउनेछन् । ती कुपनलाई उनीहरूले पार्कएन्डशपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । पार्कएन्डशप यो परियोजनामा हाम्रो साझेदार हो ।”
गैर-सदस्यहरूले समेत मेशिन प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि, उनीहरूले अंक पाउने छैनन् । एक पटक प्रयोग हुने पानीका बोतल पुनर्चक्रण गर्ने न्युन दरको पछाडि प्रोत्साहनको अभाव भएको युले बताए ।
“के फाईदा हुन्छ भन्ने सोंचेर मानिसहरू पुनर्चक्रण गर्दैनन । कहिलेकाँही ‘रिसाईक्लिङ बिन’ पुग्नु अघि नै उनीहरूले नजिकैको फोहोर राख्ने बिनमा बोतल फ्याँकिसकेका पनि हुनसक्छन्,” उनले भने ।
“सहजता मुख्य कुरा हो, त्यसपछि आउँछ प्रोत्साहन । त्यसैले हामीले पुरस्कार दिने प्रणाली शुरू गरेका हौं – जुन सेवा रिसाईक्लिङ बिनले दिन सक्दैन ।”
कम्पनीले सय वटा ‘रिफिलिङ मेशिन’ शुरू गर्ने योजना पनि बनाएको छ । परिक्षणकालमा ती मेशिनहरूले हङकङ डलर १ मा एक सय मिलिलिटर पानी बिक्री गर्नेछन् । यसले ग्राहकहरूलाई आफ्नै बोतल ल्याउन प्रोत्साहन गर्नेछ ।
गो ग्रिन परियोजना अन्तर्गत, पानी वितरक वाट्सन्स वाटरले आफुले उत्पादन गरेका बोतल आउने पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत र सन् २०२९ सम्म शतप्रतिशत बोतल संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ईन्भाईरोन्मेन्ट प्रोटेक्सन डिपार्टमेन्टका अनुसार सन् २०१६ मा, नगरबाट १० हजार ३ सय ४५ टन बराबरको ठोस फोहोर उत्पादन भएको थियो । सन् २०१५ को दाँजोमा यो १.८ प्रतिशत धेरै हो । दैनिक २ हजार १ सय ३२ टन उत्पादन हुने प्लास्टिक, खाना र कागजजन्य फोहोरपछि तेश्रो धेरै उत्पादन हुने फोहोर थियो ।
परियोजनामा विद्यालय, सामाजिक संस्था, व्यवस्थापन कम्पनी र खुद्रा व्यवसायी गरी कम्तिमा ५० वटा संस्थाले सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
आउने महिना हुने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड हङकङ म्याराथोनमा दुई वटा मेशिन राखिनेछन् । मार्चसम्म थप १० वटा डिस्पेन्सर क्वुन तोङ, चुन वान, ताई पो, सेन्ट्रल र व्वाह्मपोका फोर्ट्रेस, पार्कएन्डशप र वाट्सन्सका खुद्रा पसलमा राखिनेछ ।